सन्दिपले पहिलो खेलमै पार्थिव पटेललाई आउट गर्दा बिराट कोहली क्रिजमा थिए, सन्दिप खुसि मनाउदै गर्दा बिराट के गर्दै थिए ? – Etajakhabar
सन्दिपले पहिलो खेलमै पार्थिव पटेललाई आउट गर्दा बिराट कोहली क्रिजमा थिए, सन्दिप खुसि मनाउदै गर्दा बिराट के गर्दै थिए ?
दुई साताअघि चन्द्रनारायण लामिछाने भारतमा थिए। वैशाख १४ गते साँझ इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा दिल्ली डेयरडेभिल्स र कलकत्ता नाइटराइडर्सबीच खेल थियो। त्यो खेल चन्द्रनारायणका लागि अरु खेलभन्दा बढी नै महत्वपूर्ण थियो, किनकी उनका छोरा सन्दीप दिल्ली डेयरडेभिल्सको टिममा थिए। नेपालका प्रतियोगितामा मैदानमै छोराको खेल हेरेका चन्द्रनारायण आइपिएलमा सन्दीपको खेल हेर्न पाएका थिएनन्।
सन्दीपले बुवालाई टिकट मिलाइदिए। खेल हेर्न चन्द्रनारायण फिरोज शाह कोटला रंगशाला पुगे। तर त्यो दिन सन्दीप दिल्लीको प्लेइङ ११ मा परेनन्।
‘केही थाहा हुन्न बुवा, थाहा भए पनि भन्न मिल्दैन, अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्थ्यो,’ चन्द्रनारायणले आइतबार टेलिफोनमा सेतोपाटीसँग भने, ‘एकैचोटी मैदानमा आएपछि मात्र खेल्न पाउने/नपाउने थाहा हुन्छ भन्थ्यो, हिजो पनि टिभीमा ऊ मैदानमा आएको देखेपछिमात्र खेल्ने भएछ भन्ने थाहा पायौं।’
दिल्लीको खेल भएकाले शनिबार राति चितवन, रत्ननगर–८ स्थित सन्दीपको घरमा बुवाआमा र भाउजुले आठ नबज्दै खाना खाइसकेका थिए। सवा आठ हुनुअघि नै उनीहरू टेलिभिजन सेटअघि बसिसकेका थिए।
‘मैदानमा छोरालाई पनि देखेपछि खुब खुसी लाग्यो,’ सन्दीपकी आमा कोपिलादेवी लामिछानेले भनिन्, ‘मलाई विश्वास थियो– उसले राम्रो खेल्छ।’
आमाको विश्वासजस्तै सन्दीपले पहिलो खेलमै राम्रो प्रदर्शन गरे।
उनी पहिलो ओभर बलिङ गर्न आउँदा इंङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय टिमका अलराउण्डर मोइन अली र भारतीय ब्याट्सम्यान पार्थिव पटेल क्रिजमा थिए।
सन्दीपले पहिलो ओभरमा दुई रनमात्र दिए। दोस्रो ओभर बलिङ गरेका ट्रेन्ट बोल्टले अलीलाई आउट पारे।
आफ्नो दोस्रो ओभर बलिङ गर्न सन्दीप आउँदा भारतीय कप्तान विराट कोहली क्रिजमा थिए। सन्दीपको पहिलो बलमा कोहलीले रन हान्न सकेनन्। दोस्रो बलमा कोहलीले एक रन लिएपछि पटेलले तेस्रो बलमा चौका हाने।
त्यसको बदला लिँदै सन्दीपले चौथो बलमा उनलाई एलबिडब्ल्यू आउट पारिदिए। त्यो उनको आइपिएलमा पहिलो विकेट थियो। त्यसपछि आएका दक्षिण अफ्रिकी ब्याट्सम्यान एबि डी भिलियर्सलाई पहिलो बलमै गुग्ली फालेर सन्दीपले बिट गरे।
‘विश्वमै कहलिएका दुई ब्याट्सम्यानलाई बलिङ गर्न पाउनु उसका लागि ठूलो खुसी हो,’ चन्द्रनारायणले भने, ‘जब उसले विकेट लियो, मलाई पनि गर्व लाग्यो।’
हिजोको खेलमा सन्दीप दिल्लीका सबैभन्दा किफायती बलर बने। १८१ रनको स्कोर डिफेन्ड गर्न नसकेको दिल्लीका लागि उनले ४ ओभर बलिङ गर्दा २५ रनमात्र खर्चिए।
श्रोत – सेतो पाटी बाट
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ समय: २:२५:५४
राजस्थानमाथि दिल्लीको सहज जित
आज इन्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्ली र राजस्थान भिड्दै ,सन्दिप लामिछानेले समर्थकहरुलाई धन्यवाद दिँदै दिए यस्तो भिडियो सन्देश
आर्सनलद्वारा भ्यालेन्सिया पराजित, चेल्सी र फ्र्याङ्कफर्टले खेले बराबरी
किंग्स इलेभेन पन्जाव निलम्बनमा पर्नसक्ने, यस्तो छ कारण
आइपीएल क्रिकेटः सन्दीपलाई झुक्याइयो, अन्तिम अवस्थामा टीमवाट हटाइए उनी
आइपीएल क्रिकेटः चेन्नाइ सुपर किँग्स विरुद्ध दिल्ली क्यापिटल्स मैदानमा, सन्दीप पनि टिममा